Etu esi etinye Google Tag Manager na Universal Analytics | Martech Zone
Anyị na-emegharị ndị ahịa n'aka Google Tag Manager n'oge na-adịbeghị anya. Ọ bụrụ na ịnụbeghị banyere njikwa njikwa, anyị edeela isiokwu miri emi, Gịnị bụ Tag Management? - Aga m agba gị ume ka ị gụọ ya.
Kedu ihe bụ Tag?
Mkpado bụ obere koodu nke na-eziga ozi na ndị ọzọ, dị ka Google. Ọ bụrụ n'ijighị ihe njikwa mkpado dịka Tag Manager, ịkwesịrị ịgbakwunye snippets ndị a nke koodu ozugbo na faịlụ na weebụsaịtị gị ma ọ bụ ngwa mkpanaka. Nchịkọta Ihe Nlekọta Google Tag
Wezụga uru nke njikwa mkpado, Google Tag Manager nwere ụfọdụ nkwado nke ụmụ amaala maka ngwa dịka Google Analytics yana ị ga-achọ irite uru. N'ihi na ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ ntakịrị na atụmatụ ọdịnaya maka ndị ahịa anyị, anyị na-ahazi GTM n'ofe ndị ahịa anyị. Site na Google Tag Manager na Universal Analytics, anyị nwere ike ịhazi nghọta ndị ọzọ na nchịkọta nchịkọta ọdịnaya nke Google Analytics na-enweghị idezi koodu isi na saịtị ndị ahịa anyị. Hazi ha abụọ ka ha rụọ ọrụ ọ bụla abụghị maka obi ike, n'agbanyeghị, yabụ achọrọ m ịde ya maka gị.
Aga m ede ederede n'ọdịnihu na ịhazi Nchịkọta ọdịnaya ya na Google Tag Manager, mana maka edemede nke taa, enwerem ihe mgbaru ọsọ ato:
Etu esi etinye Google Tag Manager na saịtị gị (yana ụfọdụ nkọwa maka WordPress gbakwunyere).
Etu esi tinye onye ọrụ site na gị Agency ka ha nwee ike ijikwa Google Tag Manager.
Esi hazie Google Universal Analytics n'ime Google Tag Manager.
Ederede a abụghị naanị maka gị, ọ bụ n'ezie otu usoro nzọụkwụ maka ndị ahịa anyị. Ọ ga-enye anyị ohere ijikwa GTM maka ha wee gaa n'ihu na-ebuli otu esi etinye akwụkwọ edemede ndị ọzọ yana ka nkwalite akụkọ Google Analytics ha.
Etu esi etinye Google Tag Manager
Tinye n'ọrụ nbanye Google Analytics gị, ị ga-ahụ nke ahụ Nkume Google Tag bụ ugbu a nhọrọ na isi menu, dị nnọọ pịa banye:
Ọ bụrụ na ịtọbeghị ntọala Google Tag Manager na mbụ, enwere ọkachamara mara mma iji jee ije gị site na ịtọ akaụntụ mbụ gị na akpa gị. Ọ bụrụ n'ịghọtaghị ngwa ngwa m na-eji, gbaa mbọ hụ na ị lele vidiyo na post a nke na - agagharị gị!
Nke mbụ, kpọọ aha gị. A, ị ga-aha na mgbe gị na ụlọ ọrụ ma ọ bụ nkewa nke mere na i nwere ike ịhụ na jikwaa ọ bụla nke saịtị na ngwa ọdịnala ị nwere ike Google Tag Manager arụnyere na mfe.
Ugbu a na akaụntụ gị ahaziri, ịkwesịrị ịbido nke mbụ gị akpa.
Mgbe ịpị ike, a ga-ajụ gị ka ikwenye na Usoro nke Ọrụ. Ozugbo ị kwenyere, a ga-enye gị edemede abụọ itinye na saịtị gị:
Lezienụ anya na ebe ịtinye mkpado edemede ndị a, ọ dị oke mkpa maka omume nke mkpado ọ bụla ị ga-ejikwa n'ime Google Tag Manager n'ọdịnihu!
Iji WordPress? Aga m akwado Duracelltomi Google Tag Manager WordPress ngwa mgbakwunye. Mgbe anyị na-ahazi Content Groupings na Google Analytics, ngwa mgbakwunye a na-enyere atụmatụ aka na nhọrọ ndị a wuru iji zọpụta gị oke iru uju!
Ọ bụrụ na ị na-ahazi GTM site na iji ngwa mgbakwunye ma ọ bụ mwepu ndị ọzọ, a na-ajụkarị gị Nbanye ID. Agara m n'ihu ma gbaa ya gburugburu na nseta ihuenyo dị n'elu. Echegbula onwe gị banyere ide ya ma ọ bụ ichefu ya, GTM na-eme ka ịchọta ya dị mma ma dịkwa mfe na akaụntụ GTM gị.
Loaded tinyela edemede gị ma ọ bụ ngwa mgbakwunye gị? Egwu! Google Tag Manager awụnyere na saịtị gị!
Etu ị ga - esi nye gị ụlọ ọrụ Google Tag Manager
Ọ bụrụ na ntuziaka ndị a dị n'elu siri ike karịa, ị ga-awụlikwa elu iji nye ohere ịnweta ụlọ ọrụ gị. Naanị mechie ọkachamara ahụ wee pịa Admin na menu nke abụọ na ibe:
Ga-achọ pịa Nchịkwa onye ọrụ ma tinye gị n'ụlọnga:
[igbe ụdị = ”ịdọ aka ná ntị” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”80%”] You'll ga-achọpụta na m na-enye niile ohere na onye ọrụ a. Nwere ike ịgwọ ụlọ ọrụ gị ịnweta ụzọ dị iche. Dịka, ị ga-agbakwunye ụlọ ọrụ gị dị ka Onye ọrụ wee nye ha ikike ịmepụta ma ọ bụghị Ebipụta. Nwere ike ijigide njikwa nke Mgbasa ozi mkpado mgbanwe. [/ Box]
Ugbu a ụlọ ọrụ gị nwere ike ịnweta saịtị gị n'ime akaụntụ Google Tag Manager. Nke a bụ ụzọ ka mma iji nye ha nzere onye ọrụ gị!
Esi hazie Google Universal Analytics n'ime Google Tag Manager
Agbanyeghị na arụnyere GTM na saịtị gị n'oge a, ọ naghị eme ihe ọ bụla ruo mgbe ị bipụtara mkpado mbụ gị. Anyị ga-eme mkpado mbụ ahụ Nchịkọta Universal. Pịa Tinye Kpido Ọhụrụ na wọkspeesi:
Pịa na mkpado ngalaba na a ga-akpali gị na nhọrọ nke mkpado, ị ga-ahọrọ Nchịkọta Universal:
Ga-enweta koodu UA-XXXXX-X gị site na edemede Google Analytics nke dị na saịtị gị ma tinye ya na ngalaba ziri ezi. Adịla pịa ịchekwa! Anyị ga-agwa GTM mgbe ịchọrọ ọkụ na mkpado ahụ!
Ma, n'ezie, anyị chọrọ ka mkpado ahụ gbaa oge ọ bụla mmadụ lere ibe gị na saịtị gị:
Nwere ike ugbu a nyochaa mkpado gị ntọala:
Pịa chekwaa ị ga-ahụ nchịkọta nke mgbanwe ndị i mere. Buru n'uche na ekpughere mkpado ahụ na saịtị gị - nke ahụ bụ akụkụ dị mma nke GTM. Nwere ike ime ọtụtụ mgbanwe ma nyochaa ọnọdụ niile tupu ị kpebie ibipụta mgbanwe ndị ahụ na saịtị gị:
Ugbu a ka ahaziri aha anyị nke ọma, anyị nwere ike bipụta ya na saịtị anyị! Pịa Kwusaanụ na a ga-ajụ gị ka ịdee mgbanwe na ihe ị mere. Nke a na-enye aka ma ọ bụrụ na ịnwe ọtụtụ ndị nchịkwa na ndị mmekọ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na saịtị gị.
[igbe ụdị = ”ịdọ aka ná ntị” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”80%”] Tupu ị na-ebipụta mkpado gị mgbanwe gị na saịtị, jide n'aka na ị wepu akwukwo Google Analytics gara aga n'ime saịtị gị! Ọ bụrụ na ịmeghị, ị ga-ahụ ụfọdụ mmetụ na-esighi ike na nsogbu gị nchịkọta na-akuko. [/ igbe]
Ọganihu! 'Ve pịrị pịa ma bipụta ma chekwaa ụdị ahụ na nkọwa nke ndezi mkpado. Nchịkọta Universal na-arụ ọrụ ugbu a na saịtị gị.
Ekele, Google Tag Manager bi na saịtị gị na Universal Analytics ahaziri ma bipụtara dị ka mkpado mbụ gị!
Tags: tinye nnweta onye ọrụGoogle Analyticsmkpado googlenjikwa faili googleonye njikwa google tinye onye ọrụgoogle mkpado njikwa akpagoogle mkpado njikwa na-akpalitegoogle Universal nyochagtmgtm akpaotúwụnye njikwa tag googlepeeji nkenjikwa mkpadonjikwa njikwaakpalite na peeji nkenchịkọta ụwa niile
You're bụ ezigbo fella - M pụtara - smart fella 🙂 Isiokwu a zuru oke - kpọmkwem ihe m chọrọ iji mejuputa GTM. Ekele maka nseta ihuenyo ahụ